တစ်ဦးမာစတာဖိတ်ကြားလွှာမှ Lead ဒါက 18 အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်
အဆိုပါ မာစတာဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲ နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးကော်မတီကမဆိုလိုပါ သြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ် အဖွဲ့ဝင်များကထိုင်နှင့်ကစားရန်ရရှိသွားတဲ့သူမသူကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အဲဒီမှာအဆိုပါမာစတာအတွက်ကစားဘို့အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အားစံ၏တဦးတည်းတွေ့ဆုံသူတစ်ဦးဂေါက်သီးကိုအလိုအလျောက်ကစားရန်ဖိတ်ခေါ်လက်ခံရရှိရန်ငျြးပွညျ့မီ။
ဒါကြောင့်အဲဒီမာစတာအရည်အချင်းများဘာတွေလုပ်နေလဲ? အဆိုပါခြေစစ်ပွဲစံမှအပြောင်းအလဲများနှင့်အပြောင်းအလဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထားကြပါတယ်, ဒါပေမယ့်လတ်တလောမာစတာအရည်အချင်းများလိုအပ်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
သူတို့ထဲက 18 ရှိပါတယ်; သူတို့က, အချို့ကိစ္စများတွင်အတူနိုင်ရန်အတွက်နှင့်ရဲရင့်-မျက်နှာအတွက်ရှင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြေအနေတွင်အနည်းငယ်စာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
မာစတာဖိတ်စာ Go ကိုရန် ...
သငျသညျအဆိုပါမာစတာအနိုင်ရပါကသင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်များအတွက်ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားဆက်လက်တစ်သက်တာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း 2000 ခုနှစ်တွင်ကြောင်းပြောင်းဖို့အကြောင်းကိုခဲ့ - 65-and အောက်မှာတစ်ဦးအသက်ကန့်သတ်မယ့်နိမ့်ဆုံးပါဝင်မှုစံနှင့်အတူ 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်အကျိုးသက်ရောက်သို့သွားကြဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျက် Nicklaus ကစည်းရုံးပြီးနောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏မတိုင်မီသို့သော်စည်းမျဉ်းပယ်ဖျက်ခဲ့ပါခံခဲ့ရသည် အာနိုး Palmer က ။
သို့သော်ယနေ့အတိတ်ချန်ပီယံ, အဟမ်း, မိမိတို့ရမှတ်ရှက်စရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်တစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိတစ်ချိန်ကကစားရပ်တန့်ဖို့ "အားပေးခဲ့တယ်" နေကြပါတယ်။
ဒါဟာအတိတ်ချန်ပီယံတစ်ဦးတစ်သက်တာကင်းလွတ်ခွင့်င်နေချိန်မှာဒါ, ဒီခြေစစ်ပွဲစံ၏ဝိညာဉျအတိတ် Champs နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကအရမ်းဆိုးရမှတ်များနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ပွဲ embarrassing ကြသည်မဟုတ်အဖြစ်မာစတာ play နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, အနိုင်ရသူတစ်ဦးဂေါက်သီး အမေရိကန်ပွင့်လင်း အဆိုပါမာစတာသို့5နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည်။
4. အတိတ်မှငါးခု PGA Championship ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူ
တစ်ဦးချင်းစီကိုအဓိက၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်, ကင်းလွတ်ခွင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဖြစ်လာသည်နှင့် Non-ယှဉ်ပြိုင်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားဗိုလ်ကြီး၏ဆုရရှိသူနေဆဲ, အဆိုပါမာစတာစဉ်အတွင်းသြဂတ်အမျိုးသားမှာသင်တန်းအပေါ်အလေ့အကျင့်ပေါ်လာသူတို့ဆန္ဒရှိလျှင် Par-3 ပြိုင်ပွဲများအတွက် sign up ကို, ဒါပေမယ့်အဆိုပါမာစတာပြိုင်ပွဲသူ့ဟာသူသို့ကင်းလွတ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်၏ 5. အတိတ်သုံးဆုရရှိသူ
အသီးအသီးအဘို့တစ်ဦးက3နှစ်မာစတာကင်းလွတ်ခွင့် ကစားသမားချန်ပီယံရှစ် တစ်နည်းအတွက်ဆုရ။
အဆိုပါ အမေရိကန်အပျော်တမ်း ဒါချန်ပီယံပွဲစဉ်သို့ရတဲ့တစ်ဦးပွဲစဉ်ကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါသည် - သင်ကဆုံးရှုံးလျှင်ပင် - ထိုအဆိုပါမာစတာသို့သငျသညျရရှိသွားတဲ့။ သို့သော်ဤအမြိုးအစားကနေတဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူဂေါက်သီးနေဆဲအဆိုပါမာစတာ၏ထိုအချိန်ကအပျော်တမ်းဖြစ်ရမည်; လိုလားတဲ့လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဆိုပါမာစတာဖိတ်ကြားချက်ကိုလှည့်။
အမေရိကန်အပျော်တမ်းခြေစစ်ပွဲလိုပဲ ဗြိတိန်အပျော်တမ်း Champ နေဆဲအဆိုပါမာစတာ၏အချိန်မှာအပျော်တမ်းဖြစ်ရပါမည်။ အမေရိကန်အပျော်တမ်းကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်မတူဘဲ, သာဗြိတိသျှ Am Champ (မပြေးသမား-အထိ) တစ်ဦးမာစတာဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံ၏။
အာရှပစိဖိတ်အပျော်တမ်းနဲ့လက်တင်အမေရိကန်အပျော်တမ်း၏ဆုရရှိသူများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ချန်ပီယံအဆိုပါမာစတာများအတွက်ခြေစစ်ပွဲစံ၏စာရင်းတွင်အများဆုံး-မကြာသေးမီကဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့သြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီဒေသများရှိဂေါက်သီးကြီးထွားခြင်းနှင့်ထပ်မံအဆိုပါမာစတာလယ်ပြင် "နိုင်ငံတကာကလက်ခံသုံးစွဲတဲ့" ကူညီဖို့သူတို့ကို အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံးပြိုင်ပွဲများ၏ပစ်လွှတ်အတွက်နျဆာပခဲ့သည်။
အမေရိကန်အနေတော်အပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ်အပျော်တမ်းဂေါက်သီးအသက်အရွယ် 25 နှင့်အထက်ဖွင့်လှစ်သည်။ ဒီခြေစစ်ပွဲစံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်စဉ်အဆိုပါမာစတာလယ်သို့တစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပျော်တမ်းရရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်တစ်နှစ်ရဲ့မာစတာပြိုင်ပွဲများတွင်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင် 11 ပထမဦးဆုံး 12 ကစားသမားတွေ,
သငျသညျအဆိုပါမာစတာအနိုင်ရမနိုင်လျှင်, သင်ဆဲသင်ထိပ်တန်း 12 အတွင်း၌ပြီးသွားနေဖြင့်လာမည့်နှစ်တွင်ပြန်လာရအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ယခင်နှစ်ကအမေရိကန်ကိုဖွင့်ချန်ပီယံရှစ်အတွက်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင် 12 ပထမလေးကစားသမားများ,
ယခင်နှစ်ကဗြိတိန်ကိုဖွင့်ချန်ပီယံရှစ်အတွက်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင် 13 ပထမလေးကစားသမားများ,
ယခင်တစ်နှစ်ရဲ့ PGA Championship ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင် 14 ပထမလေးကစားသမားများ,
ယခင်မာစတာကနေလက်ရှိမာစတာဖို့ရာသီ-အဆုံးသတ် Tour Championship ပြိုင်ပွဲများအတွက် Full-အမှတ်ခွဲဝေပေးအပ်ကြောင်း PGA Tour ဖြစ်ရပ်များ၏ 15 Winners,
အဆိုပါ "Full-အမှတ်ခွဲဝေ" key ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖွင့် FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ် အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာစကားပြောလျက်ရှိသည်သော။
ယင်းအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်-Field ပြိုင်ပွဲ PGA Tour (သူများနောက်ထပ်ကဲ့သို့တူညီသောရက်သတ္တပတ်ပိုကြီးပြိုင်ပွဲကစား) ဆုချီးမြှင့်မပေးအပြည့်အဝ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်လုပ်ပါ။ ဒီတော့သူတို့အနိမ့်-အမှတ်ဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုကအဆိုပါမာစတာသို့အလိုအလျောက် entry ကိုသယ်ဆောင်မထားဘူးအနိုင်ရတဲ့။
16. ယခင်တစ်နှစ်ရဲ့ရာသီ-အဆုံးသတ် Tour Championship ပြိုင်ပွဲများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများသည်
အဆိုပါ ခရီးစဉ်ချန်ပီယံရှစ် 's လယ် FedEx Cup ကိုအမှတ်ရပ်တည်မှုအတွက်ထိပ်တန်း 30, ဂေါက်သီး၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခင်ပြက္ခဒိန်တနှစ်အဘို့အဆင့်ဟာနောက်ဆုံးတရားဝင်ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးအပေါ် 17 50 ခေါင်းဆောင်များ
အဆိုပါတရားဝင်ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးအပေါ် 18 50 ခေါင်းဆောင်များကြိုတင်လက်ရှိမာစတာပြိုင်ပွဲဖို့အပတ်အတွင်းထုတ်ဝေအဆင့်
ဒါ့အပြင်သြဂတ်အမျိုးသားရဲ့မာစတာကော်မတီက၎င်း၏မဟုတ်ရင်အရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်သူ fit ကိုမြင်မဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂေါက်သီးဖိတ်ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဤရွေ့ကားမာစတာအရည်အချင်းများပုံမှန်အားဖြင့် 90 100 ကစားသမားအနေဖြင့်တစ်ဦးပြိုင်ပွဲလယ်ပြင်၌ဖြစ်ပေါ်။
ဗြိတိန် Ladies အပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ် Winners
1998 မာစတာ: O'Meara O'Major ဖြစ်ပါသည်
1962 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း: တစ် Row ခုနှစ်တွင်နှစ်ဦး Arnie များအတွက်
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်ဖန်ဆင်းအများစုမှာဆက်တိုက်လျှော့ချ
PGA Tour Valspar ချန်ပီယံရှစ်
အဆိုပါအလွန်ပထမဦးစွာကို Mickey Mouse ကိုကာတွန်းများ
ထိပ်တန်း 15 R & B-Rap ဂီတပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ဟားဘတ် Spencer ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တစ်ကဖေးပြိုင်ကားသမား Build လုပ်နည်းလွယ်ကူပါတယ်
ရေးထားမှ Reading: နှစ်သစ်ကူးအဘို့အဟောငျးအက်ဆေး
ရေကြောင်းဂျော့ - Marina Manager ကသို့မဟုတ်အထိုင်မာစတာ
သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ '' ကိုယ်သင်အတိုင်းသင်၏အိမ်နီးချင်း Love ''
ဘာဂ် Zappers ခြင်သတ်သလား?
ဇာတ်ကောင်များနှင့် Themes ၏ Jean-ရှင်ပေါလုဆတ်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် "အဘယ်သူမျှမ Exit ကို"
ဂျာမန်ကြိယာ - wissen (သိရန်) အားလုံး၎င်း၏တင်းမာနေအတွက် conjugated
Oganesson အချက်အလက် - Element ကို 118 သို့မဟုတ်ဩဃ
အဆိုပါ 9-11 ဓာတ်ပုံများ - ဗိသုကာပညာအပေါ်တစ်ဦးတိုက်ခိုက်
ယင်းကြိယာ '' Haber '' အသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ Friendly ဖြစ်သနည်း
Mood နှင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြင်သစ်ဖော်ပြချက် Learn